INKAKHA IQEQESHE ITHIMBA ELIZOVIVINYA I-DISCOVERY 4 | IOL Isolezwe
INKAKHA IQEQESHE ITHIMBA ELIZOVIVINYA I-DISCOVERY 4
Isolezwe / 22 March 2012, 10:11am /
BEKUSHUBE kanje ngesikhathi inkakha engu-Enerst Loidl iqeqesha abazovivinya iLand Rover Discovery 4. Bazohamba ibanga elingamamayela angu-8 000
IZIMOTO ezidonsa ngamasondo amane zivamise ukwenza ezibukwayo emiqanseni, ebhuqwini, esihlabathini nasodakeni, kanjalo nasezindaweni ezimbi. Ithimba elivivinya iLand Rover Discovery lisohambweni lwamamayela angu-8 000 ngeDiscovery 4 okuvivinya le ngqovungqovu liyizwe amandla eqhweni laseSalzburg kwelase-Austria.
Leli thimba lizogcina likhenkethe zonke izinhlobo ezimbi nezinhle zomgwaqo kusukela kweyetiyela yase-Europe, kuye eziseleni zase-Ukraine njengoba linqamula eqhweni nje manje ezintabeni i-Alps libheke ezihlabathini zaseKazakhstan, libheke eBeijing kwelaseChina.
Leli thimba elibhekene nobunzima obungaka like lathi ukuma e-Australia lathola izifundo ezimbalwa ngamaqhinga okushayela ezinkeleketheni, lapho beqeqeshwe khona yinkakha u-Enerst Loidl, owake wangenela iWorld Rally Championship, nosedle imihlanganiso kaningi kwiParis Dakar. Uthe leli thimba lifike ekhaya njengoba elithathe walifaka ezindaweni ezimbi ngeyakhe iDiscovery. “E-Australia livamisile ukukhithika. Sineqhwa eliningi, kanti lapha kulo mzila wethu ungadlala nanoma yingakuphi. Njengoba sihamba kulo mzila nje nizohlangana nezindawo eziningi ongazitshela ukuthi ziqinile kanti zimbozwe yiqwa kumbe ukukhithika. Le ndlela ikahle kakhulu njengoba nisazilungiselela ukukhenketha izindawo ezimbi,” kusho uLoidl. Uphinde wakhumbuza leli thimba ukuthi ukushayela ezindaweni ezinjena akukhona okwaleli thimba elihamba ibanga elide kuphela kodwa wonke umuntu kumele ehlale ekulindele ukushayela ezindaweni ezimbi.
Uphinde walidonsa ngendlebe leli thimba ngokuthi noma ngabe unobuchwepheshe obungakanani kwi-4x4 yakho nezinto ezingakusiza kodwa wena njengomshayeli mkhulu kakhulu umsebenzi okumele uwenze. “Wena njengomshayeli kumele uzibheke kuqala noma ngabe ushayela endaweni enjani. Kumele ubeke umoya phansi ungatatazeli futhi uhlale uqaphe yonke into. Kumele ukwazi ukubona into esekude nawe, ukuze usheshe uthathe isinqumo. Uma unganakile zisasuka nje uzoba senkingeni,” kuchaza le nkakha.
Selisemgwaqeni leli thimba uLoidl ubelichazela ukuthi limelane kanjani nokushibilika kwemoto eqhweni nokuyibamba ngokushesha kulona uma kunesidingo. “Uma ushibilika kumele wehlise isivinini ngoba sizokudalela inkinga kakhulu. Kumele unyathele amabhuleki kancane ungawabhozomeli bese uzama ukulwa nokuyilawula ngesitelingi. Amabhuleki ungawaxini kakhulu ngoba i-ABS isuke isiyenza owayo umsebenzi,” kuchaza uLoidl.
Emuka kwalokhu ithimba libe seligxuma lihlala ezimotweni zalo livivinya lo mzila lilandela imiyalelo kaLoidl, ngaphambi kokuba lidlulele kweminye imizila yakhe eyisithabathaba kodwa eneqhwa. Nalapha iDiscovery ikhombise ukuba namandla ayisimanga nokubekezela noma ngabe iseqhweni.
Leli thimba lisohambeni lwamamayela angu-8000 ngezinduku ezingu-50 ngalezi zingqovungqovu zezimoto kanti zilindeleke ukuba zihambe amazwe angu-13 ukusuka lapho kwazalelwa khona iLand Rover eBirmingham zilibhekise eBeijing kwelaseChina. Zinqamula emazweni afana ne-Australia, UK, France, Switzerland, Italy, Ukraine, Russia, namanye. Lo mkhankaso obizwa ngeLand Rover Journey of Discovery, ubheke ukuba uqoqe izimali ezibalwa ngezigidigidi ezizonikelwa kwinhlangano esiza abahlwempu i-International Federation of Red Cross and Red Cresent Societies. - INTATHELI YEZIMOTO